बलात्कार कसरी रोकिन्छ ? «
बलात्कार कसरी रोकिन्छ ?
प्रकाशित मिति : १४ भाद्र २०७५, बिहीबार १४:४३
हाम्रो समजमा घाटी रहेको घटना हेर्दा द या लाग्दो रहेको छ । ६ महिना ६० वटा घटना त बहिर मुद्दामा देखिएको छ भने नदेखिएको घट्ना पनि त्यतिकै मात्रामा रेहेको छ । बलात्कार एउटा निकृष्ट अपराध भएकोले बलात्कारीलाई कडा सजायको माग हुनु नराम्रो कुरा होइन बरु ठिक कुरा हो । मृत्युदण्ड या आजीवन जेल यिनीहरुमध्ये कुन खाले सजाय उपयुक्त होला भन्ने कुरा अलग हो । तर, यो लेखको ध्येय अपराधीलाई के सजाय हुनुपर्छ भन्ने भन्दा पनि बलात्कारी जन्मने स्रोत नै के हो भनेर छलफल गर्नु रहेको छ ।
कहाँबाट आउछन् वलात्कारीहरु ? कहिलेकाहिँ मनमा यस्तो पनि प्रश्न उठ्ने गर्छ – यी बलात्कारीहरू आखिर कहाँबाट आउछन् होला र यिनलाई कसले जन्माउँछ होला ? के बलात्कारी कुनै अर्को देशबाट लुकिछिपी आएका अपराधीहरू हुन् त ? पक्कै होइनन् । अनि, के वलात्कारीहरू जन्माउने बाआमा वेग्लै जैविक गुण भएका प्राणी हुन् त ? त्यो पनि होइन । के बलात्कारीका केही असामान्य शारीरिक विशेषता हुन्छन् त ? अहँ हुदैनन् । त्यसो भए यही समाजमा जन्मेका र वाल्यकालमा खास बेग्लै लक्षण नभएका र हेर्दा सामान्य लाग्ने मानिसहरु नै कसरी बलात्कारीमा फेरिन्छन् त ? कस्तो मायालाग्दो बलक ठूलो भएपछि कसरी अमानवीय अपराधी बन्छ होला ? यि माथीको सबै हाम्रो प्रश्न हुन ।
कसरी रोकिन्छ बलात्कार ?
बलात्कार लाई उचित शिक्षा, फाँसी र Antitestosterone vaccineले राेकिन्छ। र, पुरुषहरुले आठ हजार वर्ष लगाएर निर्माण गरेका सारा पुरुष प्रधान मूल्य, मान्यता र आदर्शलाई आगो सल्काएर खरानी बनाएपछि र महिला पुरुष बराबरी हुने समाज बनाएपछि मात्र महिलाहरुको आनन्दका दिन फिर्ने छन् । अनि हुन्छ सुन्दर समाज्, बलात्कार बिहिनको एक परिकल्पना गरिएको सभ्य समाज ।